ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: မြန်မာမိန်းကလေးရဲ့ အရှက်မရှိ ၊အမျိုးမစောင့် မိဘ မောင်နှမ ဆွေးမျိုး ကိုပါမထောက်
ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံတွေနှင့် ညစ်ညမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဟိုလေးတကျော်ဖြစ်ရပ်မျိုးဆိုရင် ကာယကံရှင် မိန်းကလေးဘက်က အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်ကြလို့ မိသားစုခမျာ ခေါင်းတောင် မဖော်ဝံ့ကြတော့ပါဘူး။ အချို့မိန်းကလေးတွေဆို အရှက်နှင့်အသက်ကို လဲသွားတာမျိုးတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
အလေးအနက်မထားမိလို့ ပေါက်ကြားရာမှ ပျံ့နှံ့သွားတာမျိုးကို နားလည်မှုပေးလို့ရပေမယ့် တမင်ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိလုပ်တာမျိုးဆို အတော်ခက်ခဲသွားပါပြီ။ မိန်းကလေးအပေါ် အချစ်ရော အရှက်ကိုပါ အနိုင်ကျင့်လိုက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးက ကျောင်းဆရာမပါ။ အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ မိခင်မုဆိုးမကြီးနှင့် အတူနေပါတယ်။
သူ့ရည်းစားကလည်း ဗမာမဟုတ်ဘူး။ ကုလား။
ဒါကြီး ဘယ်လိုပျံ့လဲ၊ ဘာသဘောလဲ၊ မြန်အောင်မြို့သူမြို့သားများအတွက် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ထွက်ပေါ် နေပါတယ်။
ကုလားက သူ့ဖုန်းကို ရောင်းလိုက်တာ မကြာသေးပါဘူး။ ဝယ်တဲ့သူကလည်း ဗမာပါ။ ကုလားဆီက အချက်အလက်တွေ ပါလာမှာစိုးလို့ အကုန်ရှင်းခိုင်းပြီးမှ ဝယ်တာပါ။ ကုလားကိုယ်တိုင်က Clear ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးမှ ရောင်းလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ဝယ်သူ ဗမာလက်ထဲမှ ပေါက်ကြားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆို ကုလားဆီကနေပဲ ပေါက်ရမှာပေါ့။
ဒီအရှက်တရား ပေါက်ကြားမှုအတွက် လူမှုရေးအရရော၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရပါ မသင့်တော်လို့ ဆရာတော်သံဃာတော်များက နစ်နာသူမလေးကို ခေါ်မေးပါတယ်။
ဘာဖြစ်ချင်လဲ? ဥပဒေအရ လုပ်ချင်သလား?
မိခင်နှင့် အဒေါ်တို့က မျက်နှာဘယ်ထားရမှန်းမသိလို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေချိန်မှာ ဆရာမလေးက ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိဖြန့်တာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပဋိပက္ခဖန်တီးတဲ့အနေနဲ့ ဗမာတွေကပဲ ဖြန့်တာဖြစ်မှာပါတဲ့။
ဆရာတော်တွေ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အဖြေကို ကြားလိုက်ရလို့ စိတ်ထိခိုက်သွားကြပါတယ်။
ရိုက်နှက်ဆုံးမရအောင်လည်း ကိုယ့်သားသမီးမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်(29.7.2014) မနက်မှာ အကြောင်းပြန်ဖို့ တစ်ညစဉ်းစားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကောင်မလေးက ကုလားဆီကို ဖုန်းဆက်ပါတယ်။
“ဆက်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ထွက်ပြေးကြမှဖြစ်တော့မယ်။ မပေါင်းချင်တဲ့အချိန် ပြန်ကွာပေးပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဟန်ဆောင်ယူပြပါ”
ပြစ်ဒဏ်ပဲ အကျခံမယ်။ လုံးဝ မယူနိုင်ဘူး”
လေးနှစ်တာ တွဲလာခဲ့တဲ့ သူ့ရည်းစားက ဟန်ဆောင်ယူတာလေးကိုတောင် မလိုက်လျောနိုင်ပါဘူးတဲ့။
29.7.2014 ရောက်တဲ့အခါ မြန်အောင်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဝံသာနုရက္ခတိ အဖွဲ့က ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားလိုက်ကြပါတယ်။ နှစ်ဦးလုံးကို အရေးယူဖို့ တိုင်ကြားလိုက်တာပါ။
အခု ကုလားကို မြန်အောင်ရဲစခန်း အခန်း(၄)မှာ ချုပ်ထားပါပြီ။ ကောင်မလေးကိုတော့ ရဲမေတွေ စောင့်ရှောက် ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာမိန်းကလေးတွေဆိုတာ အရှက်တရားနှင့် အသက်ရှင်နေကြရသူတွေပါ။ အရှက်ကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားကြသူတွေပါ။
အခုတော့ ဘီယာလည်းအတူသောက်။ ဝတ်လစ်စလစ်လည်းနေပြ။
ဓမ္မတာသဘောကို ကျောခိုင်း ရိုင်းပျမှတော့ ခြေဆေးခံရတာလဲ ဘယ်ဆန်းနိုင်ပါ့မလဲနော်။
မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေက လင်ယောက်ျားအပေါ်တောင် အဲဒီလို မဆက်ဆံခဲ့ကြပေမယ့် ဆရာမလေး ကတော့ နိယာမကိုကျော်လွန်သွားခဲ့လေပြီ။
အရှက်ကိုတန်ဖိုးမထားသော မိန်းကလေးကို ဘယ်ယောက်ျားကမှလည်း တန်ဖိုးထားလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
ထိုသို့သော လောကနိယာမကို နားလည်ပေးလို့ရပေမယ့် နှမချင်းမစာနာ ဖွင့်ချလိုက်တာကတော့ တမင်တကာပဲ ဖောက်ခွဲလိုက်ခြင်းပေပဲလော။
ဦးမြင့်နိုင်တို့ ဝံသာနုရက္ခိတအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်သလို မ.ဘ.သ ဆရာတော်များရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက် မှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းကျင့်သုံးကြကုန်သော မြန်အောင်မြို့တော်သူ မြို့တော်သားများ ကံကောင်းကြပါတယ်ဗျာ။
မြန်အောင်မြို့က မူဆလင်ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တော်ကြပါတယ်ဗျာ။
မြန်အောင်မြို့ အရှေ့ဗလီဆရာ ဦးကျော်ကျော်နှင့် ဦးစိုးလင်း(ခ)အသဲတို့က အကြံသမားကုလား မင်းဝေဟန်ကို ရဲစခန်းထိ လိုက်လံအပ်နှံခဲ့ကြပြီး ပြစ်ဒဏ်ကို မညှာဘဲ ဥပဒေအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ အပြစ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ဗျာ။
ကုလားမင်းဝေဟန်က တမင်ဖောက်ခွဲသည်ဖြစ်စေ မဖောက်ခွဲသည်ဖြစ်စေ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များက တာဝန်သိကြလို့ မြန်အောင်မြို့ကြီး အန္တရာယ်မကျရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
မကောင်းတဲ့ခြေမ-လက်မတွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရဲတဲ့ ပထမဦးဆုံး မူဆလင်(ကုလားကောင်း)တွေ ပါပဲဗျာ။ ဒီအတွက် ချီးကျူးလို့ကို မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။
ဖျက်ဆီးရုံသက်သက် ချစ်တတ်သူများဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေဗျာ။
30.7.2014 PM 9:52
pm Sunday, August 03, 2014 Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်